Cryolipolysis slimming Factory - China Cryolipolysis slimming emepụta, suppliers
Igwe na-edozi ahụ - Cryolipolysis, Coolsculpting
kacha mma elu ahu slimming igwe bụ Cryolipolysis Slimming Machine (otu ihe ahụ dị ka igwe oyi). Igwe Cryolipolysis: ụzọ ọhụrụ, nke na-enweghị mbibi iji jiri nwayọ ma belata nke ọma na abụba na mpaghara ezubere iche nke ahụ nke na-ebute ọhụụ, oke abụba na-ebelata ebe ndị a na-emeso.
Dika triglyceride n'ime abụba ga-agbanwe n'ime ihe siri ike na okpomoku, o na-eji teknụzụ jụrụ ajụ iji zụlite abụba abụba ma kpochapụ mkpụrụ ndụ abụba site na nwayọ nwayọ nke na-adịghị emerụ anụ ahụ gbara ya gburugburu, belata abụba achọghị, Mkpakọrịta kọntaktị nke aka mpempe aka na-edozi ọnọdụ okpomọkụ nke anụ ahụ ma na-echebe ọmarịcha ihe eji arụ ọrụ, na-achọpụta ngwa ngwa-na-agbanweghachi mmetụta mgbe ọ na-eme ka akpụkpọ ahụ sie ike!
Cryolipolysis slimming na ahụ na-akpụzi igwe na laser
Na-akwado usoro ọgwụgwọ na-abụghị nke na-emerụ ahụ ma na-ebute "ọrụ oyi kpọnwụrụ" na ebe a na-ezukọta abụba iji wepu mkpụrụ ndụ abụba na-enweghị ike ịkwụsị. Dabere na nyocha nke Massachusetts Boston General Hospital na Harvard Medical School dermatology na America, mkpụrụ ndụ abụba na-adị mfe karị mmetụta nke oyi kpọnwụrụ, na-atụnyere anụ ahụ dị nso. Mkpụrụ ndụ abụba ga-eme ka ọ sie ike ma decomposite na 4 ℃. Ma sel ndị ọzọ dị nso ga - anwụ na 0 ℃. Ya mere, ọ nwere ike iwepu mkpụrụ ndụ abụba na-enweghị nsogbu, n'otu oge ahụ, ọ gaghị emerụ anụ ahụ na anụ ahụ dị nso nke mkpụrụ ndụ abụba.
4 cryo ejiri Cryolipolysis slimming igwe abụba Mbelata ahụ shaping
Igwe igwe Cryolipolysis dị jụụ bụ ụzọ ọhụrụ, na-enweghị mbibi iji jiri nwayọ ma belata nke ọma na abụba n'akụkụ akụkụ ahụ nke na-ebute ọhụụ, mbelata nke abụba na mpaghara ọgwụgwọ.
A ga-agbanwe triglyceride na abụba n'ime ihe siri ike karịkarịsịrị okpomọkụ. Ihe na-eme ka igwe igwe dị jụụ nke Cryolipolysis dị iche iche bụ na ọ na-eji teknụzụ jụrụ oyi dị elu iji jiri nlezianya leba anya na-ewepu abụba ma wepụ mkpụrụ ndụ abụba site na nwayọ nwayọ nke na-adịghị emerụ anụ ahụ gbara ya gburugburu.
otutu mwepụ mwepụ, Ọrịa Co2 Laser, Ems Akwara mkpali Machine, Shr Ipl Opt, Co2 Fractional Laser Machine, Shr Opt Ipl Nwepu Ntutu,